Inta udhaxeysa daalacayaasha iyo waxyaabaha laga filayo | Laga soo bilaabo Linux
Inta udhaxeysa daalacashada iyo rajooyinka
auroszx | | Aplicaciones, GNU / Linux, Kuwa kale
Waxaan dhexda uga jirnaa a dagaal. Midna maahan, laakiin mid dagaal browser. The 4 daalacashada badanaa laga bilaabo maanta waa Chrome / Chromium ( iyo wixii la mid ah), Firefox (tixgelinta Iceweasel iyo… haa, Cunaguaro…), Opera, e Internet Explorer (taasi waxay ahayd biraawsar?). Waa dagaal joogto ah halka qof walba wuu koobiyeeyaa qof walba oo cidina wax cusub ma samaynayso sidii hore. Ujeeddadaydu maahan inaan joojiyo dagaalka ama aan dhiso a olol aan xad lahayn, halkii waxaan soo jeedinayaa aan isku dayno daalacashada kale, inay jirto adduun ka duwan meeshaas.
1 Sababtoo ah noocyo badan ayaan macnaheedu ahayn horumarin badan
2 Sababtoo ah wax-soo-saarka ayaa muhiim u ah hagaajinta
3 Sababtoo ah mararka qaarkood waa inaan eegno jihooyin kale
4 Midori, oo ka hadlaya bisadaha cagaaran
5 Epiphany, qofka ugu yar
6 Rekonq, ka dib dhaxalkii dhaxal sugaha
7 Qupzilla, Firefox inaadeerkeed oo degan Qt
Sababtoo ah noocyo badan ayaan macnaheedu ahayn horumarin badan
Chrome (oo sidaas darteed chromium) ayaa lagu dhawaaqay sida boqorka cusboonaysiinta, waxaan leenahay a nooca cusub badan ama ka yar bil kastaama labadii toddobaadba mar. Maxaa horumar ah oo jiray? Wax fikrad ah maleh, waxwalba waxay ahaayeen qarsoodi, oo waxay ahayd inaad inyar hubiso ama aad aado internetka si aad uhesho. Haddii kale, ma jirin wax horumar ah oo muhiim ah oo la sheegayo.
Markaas ragga ka Mozilla waxay la yimaadeen fikrad fiican si loola socdo Google, si la mid ah u sameynaya Firefox. Mar kasta helitaanka noocyada si dhakhso leh, iyada oo aan fiicnayn. Ka soo Firefox 4, arrimihi waxay noqdeen kuwo fool xun A isticmaalka xusuusta aan loo baahnayn, kaas oo lagu hagaajiyay nooca 15 (Waxaan ku dheganahay wararka xanta ah, maxaa yeelay inta ugu badan ee aan isku dayay waa 14, runtuna ma xuma 😛).
Sababtoo ah wax-soo-saarka ayaa muhiim u ah hagaajinta
Hadda daalacashada wax badan ayaa ka mid ah egyihiin midba midka kale, sida xaqiiqda ah in badankood (hadaan wada ahayn ...) leeyihiin taageerada kordhinta / fiilooyinka ama a Wareeg degdeg ah. Taas oo aniga ilama xuma aniga, laakiin waa in qof la soo baxo astaamo badan xiiso leh, oo leh horumar wax ku ool ah gudaha habeynta bogga ama Isticmaalka Kheyraadka.
Waxaan rabaa inaan xoojiyo jumlada ugu dambeysa, isticmaalka kheyraadka. Dad badan ayaa tan uga takhalusi cudurdaarka: «Haye, waxaan horeyba ugu jirnay sanadka 20XX, waxaa durba jira mashiinno awood badan«. Haa, waa jiraan, laakiin kulligeen ma wada haysanno lacag aan ku iibsanno mid cusub. Waxaan qabaa inay ka fiican tahay hagaajin, halkii aad uga bixi laheyd cudurdaarka wax iibsiga qalabka ugu dambeeya.
Sababtoo ah mararka qaarkood waa inaan eegno jihooyin kale
Haa nolol jirta ayaa jirta Chrome / Firefox / Opera. Immisa naga mid ah ayaa isku dayay isticmaalkeena maalinba maalin daalacashada sida jannayo, Midori, rekonq o Qupzilla? Haa, malaha ma badna.
Waxaa laga yaabaa inaan dhahno in daalacashadaas aysan sidaas aheyn «horumarsan"sida inta kale. Laakiin haddii kale waan tijaabinay, Waxaan soo sheegnaa cayayaanka, waxaan ka caawinaa horumarkooda ... Ma filan karno taas hagaajin soon iskood. Xaqiiqda fudud ee ah tiro aad u tiro badan oo dad ah isticmaal, wuxuu ku dhiirrigelinayaa kuwa horumariya inaad dadaal badan.
Midori, oo ka hadlaya bisadaha cagaaran
Horaa loo xusay Midori hal ama laba jeer baloogga, laakiin way fiicantahay inaad xusuustaada ku booddo. Midori waa biraawsar «iftiin"(la Wikipedia Waxay tiri waxay luntay ujeedkan ujeedkeedu ahaa nooca 0.4.0, ma hubo sidaas ...) leh Interface GTK. Adeegso WebkitGTK (kaalay, Webkit daaqadaha GTK) loogu talagalay siinaya boggaga internetka. Xusuusnow taas Chrome / Chromium USA Qalabka mareegaha sidoo kale, sidaa darteed waxay leeyihiin xawaare xamuul ah la mid ah.
Magacaaga, Midori macnaheedu waa "cagaaran»Jabbaan ahaan, astaanteeduna waa bisad gacanteeda, taas oo salka ku haysa dareen xawaaraha. Haa, waa cagaar.
Qaar baa laga yaabaa inay u yaqaanaan inuu yahay biraawsarka aasaasiga ah ee loogu talagalay aasaasiga, iyo sidoo kale mid ka mid ah codsiyada lagu taliyay by kooxda Xfce (kaas oo horumariyeheedu ka yimaado). Waxaa sidoo kale ku jira «iftiin"(leh LXDE ama Xfce) qaar ka mid ah distros sida Trisquel, Slitaz ama Sabayon.
Midori Way fududahay, waxay leedahay maxay leedahay aasaasiga ah in aad ku arki lahayd biraawsar. Tab, calaamadaha, a Wareeg degdeg ah iyo qaar kordhin. Midori asal ahaan la jaan qaadaya Qoraallada isticmaalaha y Isticmaalka (maqnaanshaha qalab, ka xun waxba ma aha). Gudaha kordhinta ayaa lagu daray istaag a xayeysiiska, tifaftiraha cookie, a Akhristaha RSS feed, iyo kuwo kale.
Iyadoo Midori ayaa lagu soo daray keydadka qaybinta badankood, badanaa waa nooca 0.4.3 ama ka hooseeya. Haddii aad rabto inaad hesho nooca ugu dambeeya ee Midori (0.4.6), waad soo degsan kartaa .tar.gz halkan:
Hadaad rabto a .deb xirmo taasi wax badan ayey u shaqeysaa Debian sida Ubuntu (oo laga soo dheegtay labadaba), waxaad ka soo degsan kartaa halkan:
Midori .deb (32-waxoogaa)
Midori .deb (64-waxoogaa)
Epiphany, qofka ugu yar
Waxaan dhihi karnaa waa mid ka mid ah kuwa ugu isticmaalka yar. jannayo (oo hadda loo yaqaan «Web» ...) waa biraawsar ay iska leedahay desktop-ka Gnome, iyo isticmaal Qalabka mareegaha si loo bixiyo bogagga shabakadda. Waxaa lagu gartaa iyada naqshad yar, oo markiisa uu leeyahay a isticmaalka habboon.
Waa farac ka mid ah biraawsarka «Galleon«, Laakiin u hoggaansamida hadda«Heerarka isku-xirnaanta aadanaha ee Gnome«.
Astaamo kayar Midori, laakiin taasi kama dhigayso wax faa'iido yar. Dhanka kale, iyaga kordhin, oo ay ka mid yihiin a xayeysiiska, ciyaaryahan HTML5 video loogu talagalay Youtube (Waa maxay sababta, haddii boggu ku siinayo ikhtiyaarka ...), Dufan daayeer (si aad u isticmaasho UserScript), iyo kuwo kale.
In kasta oo aan wax badan oo ka mid ah ay ku jiraan iyada oo aan caadi ahayn, waxaan haysannaa jannayo keydadka meelaha ugu caansan. Tusaale ahaan, si aad ugu rakibto Debian waxaan fulin:
Rekonq, ka dib dhaxalkii dhaxal sugaha
Kuwo badan waa inay mar horeba wax ka akhriyeen biraawsarkan, gaar ahaan tan iyo dhawr bilood ka hor wuxuu gaadhay nooca 1.0. Sida kuwii hore oo kale, isticmaal mishiinka wax bixiya Qalabka mareegaha (si sax ah, QtWebkit), waxaana la dhihi karaa waa kan dhaxlay biraawsarka Guureeye. Waxaad u leedahay isticmaal la aqbali karo adiga fursado badan, kaas oo lagu gartaa codsiyada desktop-ka KDE.
Qeybin kala duwan sida Chakra y Kubuntu Waxay u qaateen sidii browser-keedii hore.
Ma laha taageero kordhin, laakiin waxay leedahay taageerada Flash iyo HTML5. Wax aniga iga yaabisay ayaa ah in ilaa maanta ay ku xidhan tahay Guureeye inaad bedesho taada Wakiilka isticmaalaha (Inta aan ka ogahay…).
Waxaan ku rakibi karnaa ku dhowaad dhammaan qaybinta, gudaha Debian waxaan ku rakibnaa:
Qupzilla, Firefox inaadeerkeed oo degan Qt
Qupzilla waa biraawsar loo sameeyay ku saleysan Firefox, oo leh qaabab yar oo muuqaal ah, marka lagu daro lahaanshaha a Qt halkii laga isticmaali lahaa XUL (taasi waxay sifiican ugu dhexjirtaa GTK). In kasta oo ay u egtahay Firefox, matoorkeeda haya'ad ayaa ah Qalabka mareegaha
Waxay ku habboon tahay kordhinta / plugins de Firefox, wuxuu kuu ogolaanayaa inaad bedesho Wakiilka isticmaalaha ka soo xulashooyinka menu, ku keydi sirta gudaha KWllet, isku xira xayeysiiska, xaqiiqdii waxay mudan tahay isku day.
Si loo rakibo, waa inaan soo dejiso xirmada qaybintayada oo ku rakib (mooyee in loo qaybiyo keydkeeda, sida Chakra).
En Debian / Ubuntu iyo waxyaabo ka soo jeeda ayaa lagu rakibi doonaa sidan (ama way ku furi karaan GDebi):
Waxay awood u yeelan doonaan inay arkaan, daalacashada jecel rekonq y Midori si tartiib tartiib ah ayey u horumarsan yihiin waxayna leeyihiin noocyo yar. Oo weliba sidaas, waxay leeyihiin qayb wanaagsan oo ka mid ah shaqooyinka daalacayaasha kale oo leh tiro badan oo noocyo ah.
Kani waa xulasho yar oo daalacashada ah, aniga ayaa isweydaarsanaya Midori y chromium, isbedel. Adiguna, Ma isticmaashaa mid ka mid ah daalacashadaas? Waa maxay daalacashada ay isticmaalaan? Xusuusnow in qof walba ra'yigiisa halkan ka shaqeynayo 🙂
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » Inta udhaxeysa daalacashada iyo rajooyinka
Waxaan badiyaa daalacashada badanaa, waxaan jeclahay inaan tijaabiyo dhammaantood oo aan arko sida ay u shaqeeyaan. Laakiin marwalba waxaan ku noqdaa inaan ku soo laabto Firefox xasilloonideeda iyo shaqeeynteeda. Waxaan u adeegsaday mid kasta oo ka mid ah kuwa aad ku sheegtay liiska, iyo kuwa laga tirada badan yahay waxaan jeclahay dhammaantood si siman. Laga soo bilaabo Midori waxaan u xiisay maareeyaha furaha, Rekonq xasilooni dheeri ah, iyo Qupzilla (oo laga yaabo inay noqoto tan ugu fiican dadka laga tirada badan yahay) maamul maareynta ugu wanaagsan (Waxaan la qabatimay fayl faylalka ku dhex jira).
Waxaan haystaa Midori iyo Qupzilla labadaba waana necbahay labadoodaba. Markii aan isticmaalo Qupzilla oo aan doonayo inaan xiro tab, badanaa waxay dhacdaa inuu xirmo. Laakiin Midori ayaa ka sii xun, waxay si kadis ah u xirtaa inta badan Qupzilla.
Taasi waxay igu dhacday aniga Midori, illaa aan rakibay nooca ugu dambeeya, taasi waxay ka imaaneysaa ilaha laga soo xigtay, ee ma ahan xirmada la sii diyaariyay.
Ku jawaab Viajerou
Qupzilla waxaan u isticmaalaa nooca git, waana xasilloon tahay. Waa dhif iyo naadir maxaa yeelay wax yar uun ka dib markii la soo saaray cayayaankaas ayaa ka muuqday tabka oo markii uu bilaabayna waa ay hagaajiyeen, marka nooca ugu dambeeya waxaa ku haray cayayaankaas, qof kasta!
Taasi waxay ku dhacday in ka badan wax kasta oo ka mid ah noocyadii hore, aniga igama xirna muddo dheer (iyadoo la adeegsanayo 0.4.6). Xitaa waxay xalliyeen dhibaatooyinka https ee aniga xoogaa i dhibay.
Waxaan hayaa 0.4.6 (kaas oo la rakibey Sabayon) wuuna xirmayaa markaan rabo inaan hagaajiyo adblocker-ka
Qupzilla ahaan, waxaan haystaa 1.3.1 (waxaan amarkayga ku sameeyay sabayon bugzilla, taas oo ka hor inta nooca ay haysteen ahayd 1.1.8)
SRWare Birta caado maahan kaliya. Waxaan isku dayey Midori waana fiicantahay waana fududahay, aad baan ujeclahay laakiin waxaan dhib ku qabaa inaan farriimo uga diro facebook hahaas
Aniga shaqsi ahaan waan jecelahay inaan isticmaalo Rekonq iyo Opera ... laakiin labaduba waxay leeyihiin dhibaatooyin xoog leh oo boggaga qaarkood ah (gaar ahaan google) marka mararka qaarkood waxaan ku tiirsanaa chromium.
Ku jawaab eleefece
Maqaal wanaagsan, Ma aanan aqoonin Qupzilla, waa inaan isku dayaa inaan arko sida ay u shaqeyso. Waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado aragtidaada ku saabsan Opera, horay ayaan u isticmaali jiray, ma garanayo sida ay hadda u wanaagsan tahay.
Waxaan laqabsaday SRware Iron ama Chromium, midori, firefox, epiphany mararka qaarna way shaqeysaa, si loola jaan qaado mobilada ... laakiin waxaan doorbidayaa Birta iyo Midori
Waxaa jira waqtiyo markaan isticmaalo Konqueror, laakiin Opera badan.
Hagaag waxaan isticmaalaa Firefox iyo Rekonq. tan dambe wax badan baa hagaagtay, gaar ahaan xagga xasilloonida.
Aniga oo kale, Firefo-kde-opensuse (oo horey ugu jiray xirmooyinka) iyo rekonq labaad, oo laxiriira qupzilla aad uwanaagsan waana madal badan.
Waxaan u maleynayaa inaadan iloobi karin opera liiskaas
Waxaan ula jeedaa in chome, Firefox iyo IE ay yihiin kuwa ugu caansan iyo in Opera uu geli doono liiska kale oo ay weheliyaan Epiphany (web), Midori, iwm. dadka caadiga ahi xitaa ma oga in Opera jiro iyo haddii chome, firefox iyo IE
Waad salaaman tihiin, halkan ma joogin waqti dheer. Maqaal wanaagsan, waxaan u maleynayaa inaan qabsadey dhammaantood marka laga reebo Qupzilla oo aan horay u soo dejinayo oo aan doonayo inaan isku dayo.
Dhamaan waad salaaman tihiin!
mmm ee 4-ta ugu badan ee la isticmaalay waxaan u maleynayaa in opera-ka uu hal-abuurnimo badan u leeyahay faahfaahinta kala duwan, wali waxaan isticmaalaa Firefox, chrome / chromium laakiin aad ayaan uga jeclahay opera .. post wanaagsan
Ku jawaab Moe
Browser-ka ugu weyn ayaa ah wuuna sii socon doonaa inuu ahaado firefox iyo qupzilla labaad.
Markii aan ku bilaabay tuubada Linux, waxaan ku qasbanaaday inaan isku dayo daalacashada kale (chromium / srware, iron, opera, qupzilla, rekonq) maxaa yeelay waxqabadka uu Firefox lahaa aad ayuu u liitay (in kastoo tan ay ku fiicnaatay noocyada cusub), gabagabada ka hartay imtixaannada waxay ahaayeen:
* birta chromium / srware: waa mid aad u dhakhso badan, is dhexgal wanaagsan oo la leh kde, laakiin waxaan qabaa dhibaatooyin xagga maqaarka ah oo ku jira daalacayaasha qaab-dhismeedka chrom-ka ah, la qabsiga ma la qabsan karo
* Opera: Aad baan ujeclahay, waa wax dhaqaaqa, aadna loohabeyn karo, sidoo kale waxaan arkay qeexitaanada opera 12 waana faraxsanahay waxayna noqoneysaa biraawsarka ugu weyn, laakiin markii aan cusbooneysiiyay qeybta 12 waxay noqotay mid gaabis ah firefox (waa wax aan macquul ahayn) sidaa darteed waan iska daayay isticmaalkiisa.
* rekonq: is dhexgal aad u wanaagsan oo lala yeesho kde, laakiin waxay ahayd mid aan degganayn.
* qupzilla: cunugga baastada ah ee udhaxeeya Firefox iyo chrome: dhaqso iyo iftiin - mahadsanid qt iyo webkit-, xasiloon oo qaata cunsurrada interfacefoorka adoon noqonin nuqul, intaas waxaa usii dheer cusbooneysiin kasta oo uu ku shaqeynayo isla markaana aan lumineynin iftiinka ama xasilloonida.
* Firefox: Marwalba waan jeclahay, waxaan ula qabsan jiray ilaa heer markii aan u baahanahay inaan ka soo rakibo xoqid, ama berri ama sanad, waxaan xusuustaa qalbigayga ikhtiyaarrada "about: config" ee aan haysto inaan taabto si aan uga tago sidaan rabo. Sidii aan horay u sheegay, isdhexgalka ma aha mid aad u dheecaan leh iskudhafka kde waa xun yahay (in kastoo ay jiraan waxyaabo laxiriira oo kani waa nooca furitaanka), wuxuu leeyahay kudhisan / plugins ugu dhameystiran - sida ugufiican ee loo hubiyo waa isbarbardhiga ikhtiyaarrada ay isla plugins-ku keenaan chrome / chromium oo ay ku shaqeeyaan kuwa ay keeneen Firefox - waa midka sida ugu wanaagsan uga faa'iideysanaya baarka hagidda ee dhammaan (dib u dejinta walxaha u dhexeeya) iyo iyada oo aan lagu rakibin wax qalab ah, waana helay aad ayey ugu raaxeysan tahay in lagu horumariyo Firefox.
Ku jawaab kebek
Waxaan rajeyneynaa in Google ay ku daasho sameynta qandaraasyo ay la gasho Mozilla si ay lacag ugu durto oo ay u taageerto FF si ay u aragto haddii ay sii socoto in loo isticmaalo "weligeed. xD
illaa inta ay raacayso saamiga suuqa ay ku leedahay ...
Waan jeclahay Firefox waxaanan ka mid ahay kuwa aaminsana in hagaajinta isbedelka "versioning" ay badan yihiin aadna u muuqdaan. Maqaal wanaagsan.
Kuwani waxay noqon karaan daalacashada oo leh 'caadi' dhexgal. Waxaa jira daalacayaal badan oo halkaas jooga oo leh ruuxi aad u yar, isku dayaya inay ka faa'iideystaan ​​dariiqooyinka gaaban ee Vim ama Emacs ama maxaan ogahay ama isku dayayaa inaan noqdo iftiinka ilaa xad.
Luakit, tusaale ahaan; Waa mid raadineysa in loo dhawaado Vim iyadoo la adeegsanayo qorshe qaabeyn ku saleysan luuqadda barnaamijka Lua, sida ugu fiican ee loo sameeyo, maareeyaha daaqadda mashiinka Webkit. Tani waa sida 'dhif' u tahay barnaamijyada noocan ah.
Laakiin haye, qoraal wanaagsan; laakiin Qupzilla waxay ku saleysan tahay Webkit ee maahan Gecko; inkasta oo ay u muuqato wax iska soo horjeed ah; isla bogga rasmiga ah ayaa sidaa leh.
Waad saxantahay, waan sixi doonaa sida ugu dhakhsaha badan: S
Marwalba waan isticmaali jiray Firefox, marka laga reebo sanadkeygii ugu horeeyay ee aan adeegsado kombiyuutarka (1999) waana ogaaday faa iidadiisa iyo qasaarihiisa laakiin wali waa barowsarkayga ugu weyn. Sidoo kale habka aan ugu socdo illaa 36 tab oo furan, chrome wuxuu dilaa kombuyuutarkayga iyo midori-kayga ayaa ah mid aad u qallafsan marka la isu beddelayo tabka.
Waxaan isku dayi doonaa Qupzilla
Ku jawaab Cesasol
Chromium iyo Firefox!
Sababta afartan bog furayaal loo adeegsado ayaa ugu wacan inay yihiin ficil ahaan kuwa kaliya ee aad kala soo bixi karto 100% waxyaabaha ku jira websaydhada dhib la'aan, baalalleyaasha kale oo dhami waa "kan labaad", midka aad u isticmaasho inaad wax ku hubiso ku soomi degel aad ogtahay inuu socon karo iyo markaad nasato oo leh 40 tab markii la furayo.
Waxaad ilaawday Safari, oo ah mid aad u fiican.
Hagaag haa, midori waa biraawsar weyn, waa mid ka mid ah 3-da aan aad u isticmaalo, oo ay weheliyaan Iceweasel iyo Chromium
Ilaa iyo inta aanan "daruur" u hagaagsan karin calaamadaha, furaha sirta ah, iyo in ka badan, waan sii wadi doonaa isticmaalka Firefox.
Ilaa maantadan la joogo, shaqadan ayaa muhiim ii ah aniga.
Ilaa iyo inta Opera ay leedahay shaqeynta isuduwaha muddo sanado ah, waxaan u maleynayaa xitaa kahor intaysan firefox isku darin ...
Taasi waa sax, Firefox badanaa had iyo jeer waa kan ugu dambeeya ee waxyaabo haysta.
Laakiin sidoo kale isagu badanaa waa kan hela "kan gaarka ah".
Waxaa jira wax ay sameeyaan Chrome iyo FF, waxayna si fiican uga barteen Apple: Suuqgeynta !! xD
Iyadoo opera lagu sameyn karo, iyada oo ikhtiyaarka leh magaca Opera Link
Ku jawaab albertt
QupZilla waa biraawsar shabakadeed casri ah oo ku saleysan aasaasiga Webkit iyo Qt Framework. WebKit wuxuu damaanad qaadayaa daalacashada degdegga ah iyo helitaanka Qt dhammaan meheradaha waaweyn.
Waa hagaag taas.
Waxaan gaadhay meesha maqaalku leeyahay:
"Waa dagaal joogto ah oo qof walba uu nuqul ka dhigayo qof walbana cidna wax cusub ugama abuureyso sidii hore ..."
Opera waa midka dejinaya codka tan iyo markii uu ahaa khariidada Netscape.
Wicitaanka xawaaraha, kalfadhiyada keydinta, tabyo badan, xannibaadda pop-up-ka, xannibaadda animations-ka si loo sameeyo daalacasho badan oo dheecaan ah, aqoonsi ahaan biraawsar kale, macmiil durdur ah, macmiil boosto, maamule soo dejin, soo dhaweyn, turbo, nadiifinta macluumaadka, isticmaaleyaal badan, jiir tilmaam, aalado, midoobid, higaada higaada, habeynta booska tabs, opera link, opera mobile Mother. Hooyaday, iga caawi in aanan xasuusan karin intaan xasuusto.
Opera Link oo iswaafajinaya ereyada sirta ah, qoraalada, hal guji oo ka fog dhamaan shaqooyinka aad sheegaysid oo leh Golayaal, Bog ku hagaaji ballaca [Waxaan badanaa u adeegsadaa shaqadan], samee raadinta si fudud, daalacashada khaaska ah ee tabta ma jirto wax aan ku qasbanahay fur daaqad gooni ah, kordhinta, laakiin xitaa kuma isticmaalo firefox.
Maqaal aad u fiican. Waxaan guriga ku isticmaalaa Firefox, Midori iyo Chrome, LAAKIIN waxaan haystaa dhibaatada ah in Midori si lama filaan ah loo xiro, Chrome waxay ka dhigeysaa kumbuyuutarka mid aad u gaabiya! oo Firefox runti sifiican ayey aniga ila shaqaysaa. Sidoo kale kormeeraha processor-ka ee LXDE wuxuu u keenaa si caadi ah waxaan arkayaa sida uu ula socdo Chrome xagga sare. Waxaan horeyba u rabay inaan ku laabto guriga si aan isugu dayo Rekonq, Maqaal aad u wanaagsan.
Ku jawaab Manuel_SAR
Maqaal wanaagsan. Difaacayadeyda waxaan dhihi karaa waxaan isticmaalay ku dhowaad dhammaan daalacashada la heli karo: Had iyo jeer waxaan ku laabtaa Firefox.
Wanaagsan !! Eeg, waxaan isku dayayaa Epiphany iyo Midori muddo hal ama laba sano ah oo aan isticmaalayay iyo natiijooyin aad u wanaagsan haddii waxa aad rabto ay tahay xawaare iyo degganaansho ilaha hooseeya ama aadan doonayn inaad gasho adduunka Kaydka Chrome haha, taas oo dhadhankeyga uu leeyahay waxyaabo yar qalab.
Haddayna ahaynna, waxaan u adeegsanayaa Firefox shabaqayga netka oo aan la socdo Xubuntu si fiicanna wuu u shaqeeyaa oo desktop-kayga waxaan ku leeyahay Chromium in tmb aad u dhakhso badan yahay laakiin isticmaalka kheyraadka ayaa ka sarreeya.
Iyo qalab dulmar ah: Windows wuxuu u shaqeeyaa cayaaraha 😀 haha
Qoraal wanaagsan. Waxaan isticmaalaa opera iyo chromium maxaa yeelay dhib badan iima hayaan (firefox overloads my cpu, midori wuu xirmaa mana jecli qt)
Waa inaan qirto in tan iyo markii aan xiiseynayay rakibida FEDORA 17 oo aan raadinayay macluumaad ku saabsan baloog sidan oo kale ah waxaan baranayaa waxyaabo cusub.
Ma aanan ogeyn in daalacashadaas ku xusan maqaalka ay jireen. hadaan ogahay Internet Explorer, Mozilla Firefox ilaa noockeedii ugu dambeeyay runtiina waan jeclahay Firefox. Opera iyo Google.
Waxaan isku dayi doonaa kuwa kale gaar ahaan MIDORI haddii aan jeclahay. Isticmaalahan kasta wuxuu leeyahay dhadhankiisa, waan jeclaan karaa kuwa kalena ma jecla. ama vivecersa.
Waxaan kaliya la yaabanahay sida ay isugu kalsoonaan karaan Qaar waxay dhahaan sahaminta internetka waxay aad ugu nugul tahay in fayras lagu weeraro ama iyada oo loo marayo bog furahan ay ku maamuli karto fayrasyada, kuwa kale waxay dhahaan Firefox wuu ka fiican yahay isbadalada joogtada ah ee uu sameeyo. laakiin waxay u muuqataa inay tahay nooca kaliya oo aan lahayn isbeddelo badan.
Hagaag, waxbadan kama aqaano kumbuyuutarka, kaliya waxaan la wadaagayaa wixii ay ii sheegeen.
Kaliya waxaan la yaabanahay sida ay isugu kalsoon yihiin?
Waxaan u maleynayaa inay la mid tahay qof walba.
Dareenkaas, kalsoonidu waxay ka imaan kartaa wax ka badan wax kasta oo ka mid ah sida yar loo adeegsaday biraawsarku, taas oo ah, nabadgelyo ka badan gacanta xulashooyinka aan la isticmaalin.
Sidoo kale aniga waxaan galiyay kaalinta labaad, faahfaahin dheeri ah oo gaar ah oo daalacayaasha qaar ay leeyihiin, sida sanduuqa sandbox ee tabka Chrome waxaanan u maleynayaa inay taasi gelin karto is dhexgalka ay daalacashada qaarkood ku hayaan waxyaabaha OS ka soo jeeda sida ASLR iyo Windows DEP (waxaan leeyahay WAAN Aaminsanahay maxaa yeelay waxaan moodayay mar aan aqriyay in biraawsarayaashu ay dhexgalaan waxyaabahaas iyo in IE9 iyo Chrome ay ahaayeen kuwa ugufiican / kali ah markaa), in kastoo aysan ahayn waxyaabo aan lagumagali karin, inay wax yihiin. Laakiin sidaad ogtahay "markay dano jirto caqabado majiraan" kuwa badan oo adeegsadayaal ah oo aan shaki ku jirin ayaa aad u xiiso badan.
qaar waxay dhahaan sahaminta internetka waxay aad ugu nugul tahay in fayrasku weeraro ama fayrasyadu waxay ku dhex mari karaan biraawsarkan,
In markaad furato IE aad hesho fayras ama inaad isticmaasho IE ay rakibayso wax walba, waa been.
Khatar baa jiri doonta maxaa yeelay dad badan ayaa isticmaala, laakiin wax intaas ka badan ma isticmaalaan.
kuwa kale waxay dhahaan Firefox waxay ufiican tahay isbedelka joogtada ah ee ay sameyso. laakiin waxay u muuqataa inay tahay nooca kaliya oo aan lahayn isbeddelo badan.
Waxay yiraahdaan Firefox waa tan ugufiican kaliya Firefox, taasi waa sidii ay waligeedba ahaan jirtay sababtuna waa sababta kaliya ee loo badalay ay tahay kaliya qiil u sameynta shaqada.
U fiirso taas in had iyo jeer la yiraahdo oo cusbooneysiintu waa mid dhow, waa sababta maanta. Inkasta oo qodobkani keenay waxyaabo fiican (ugu yaraan wuxuu yara yaraaday dib u dhacii weynaa ee biraawsarkan ku yimid marka loo eego xulashooyinka kale) sidoo kale wuxuu keenay dhibaatooyin iyo xasilooni darro, sidaa darteed qaar ka mid ah liinta iyo kuwa kaleba ciid, ma ahayn mucjisada taasi waxay u rogtay wax walba dahab.
Hagaag, waxaan u janjeeraa dhanka Chromium iyo Firefox;)!
Fariin heer sare ah, si saraaxad leh ayaan u wada adeegsaday dhammaantood (Opera Konqueror Firefox Qupzilla Chrome Gnome web Chromium iyo Rekonq) si daacadnimo ah kuwa ugu cadcad waa Gnome web Firefox Opera iyo Chrome, waxaan raadsadaa ugu yaraan iyo awood iyo Midori ayaa siisa laakiin sidoo kale waxaan raadsadaa raaxo si daacad ah Midori waa shaqo adag oo leh calaamadahaaga sidaa darteed kuma liis garaynin bog furayaasha aan ugu jeclahay
Haa, waxaan u arkaa wax dhib ah inaan u soo dhoofiyo calaamado Chromium gudaha Midori 😐
Taasna jooji, ficil ahaan helitaankooda waa wax laga xumaado, taasi waa sababta aan uga fikiro illaa shan jeer ka hor inta aan rakibin OS-ka aasaasiga ah, maxaa yeelay waxaan ku noolahay shabakadda dhexdeeda in ka badan xD-ga maxalliga ah
Ma noqon karto mowduuca laga hadlayo. laakiin waxaan rabaa inaan la wadaago wax aan ku arkay shabaqa waxaan rabaa faallooyinkaaga haday run noqon doonaan iyo in kale waxayna u jeedaan Trojan cusub oo ku dhici kara OS-ka hoosta Linux iyo mac
Ma aqaan sida ay run u tahay macluumaadkaasi.
Kuwa leh Midori wuu xiran yahay, xusuusnow in tani ay inbadan kudhacday noocyadii hore, 0.4.6 kamay dhicin. Ama uguyaraan aniga layma xirin bog kasta.
Waan kugu raacsanahay saaxiib 😀
PDayaanna @ dijo
Chromium. Waxaan ku xiraa koontadayda google-ka waxaanan iska illaawo calaamadaha, taariikhda, raadinta, iwm.
Haa, waan ogahay inay jiraan Firefox Sync (iyo kuwa kale) laakiin waxaan had iyo jeer isticmaalaa Google Apps.
Jawaab JP (@edconocerte)
On Internet Explorer, eeg warkan maanta
Ma jiraa qof kugula talin kara nal iyo biraawsar xasilloon kde?
Adeegsiga degdegga ah ee aan ku bixiyo desktop-ka, 1,7GB-kayga kuma filna inuu galo dhowr degel websaydh culus ah oo ku yaal Firefox 15 oo aan sameeyo wixii aan sameeyo, mahadsanid
RAM-kaas, uma maleynayo inay fikrad fiican tahay in la adeegsado KDE, khibradeyda shaqsiyadeedna firefox waa tan ugu fudud, waxaana ku xiga opera
Haa, laakiin haddii aad rabto minimalism isla waqtigaas, ikhtiyaarkeyga aaminka ahi waa shabakadda Gnome
Way adag tahay in aan la quusanin markii lala shaqeynayo Midori iyo Rekonq ka dib markii loo isticmaalay Safari iyo Chrome W ... in kasta oo ku jira LM13-KDE-64 oo leh 6GB RAM xasuusta ma ahan dhibaatada, daalacayaashani wali sidaas ma ahan waan ka shaqeeyey si aan iyaga u doorbido, waxaan sii wadaa inaan ku adkaysto adeegsiga iyaga oo aan u soo sheego cayayaanka mararka qaarkood ii laalaada oo xira wixii aan ka shaqeynayo, laakiin fudeydka aad kula shaqeyso Chromium, Firefox iyo Opera, OS kasta wuxuu ka dhigayaa inay muhiim yihiin, si kastaba ha noqotee haddii aan doorano Linux waa inay ku taageertaa kuwa horumariya barnaamijyadan xoogaa shaqo ah, sidaad xustay, taasi waxay ku dhiirrigelinaysaa inay sii wadaan nadiifinta iyaga si ay uga sii wanaajiyaan maalin kasta.
Waxaan dhameystirayaa tan kore; Hadda waxaan soo degsaday nooca qupzilla_1.3.1_amd64 oo ku yaal .deb oo aan rakibay laakiin kuma sii nagaan Isbaanishka, waxaan raadiyay waddo mana awoodin, waana taas sababta aan toos ugu rakibo nooca QupZilla-1.3.5 kaydka iyo maadaama aysan ku jirin Isbaanishka sidoo kale, waxaan baaray wax yar iyo Xulashada - Guud ahaan waxaa jira kaliya 2 xulasho: Isbaanish, Venezuela (es_VE) iyo Isbaanish, Isbaanish (es_ES) markaa dooro mid ka mid ah 2, codso ... waad aqbashay dib u bilow oo gabi ahaanba waa Isbaanish. Waxaan dhajiyay tan si ay ugu muuqato doqon kuwa horay khibrad u lahaa laakiin kuwa cusub iyo kuwa ku cusub Linux aniga oo kale waa caawimaad weyn oo aan laga niyad jabin.
U soo noqoshada mowduuca, aad baan ula dhacay barowsarkani waana mid aad loo qaabeyn karo, waxaan horey u soo dhoofiyay calaamadeyda, furaha sirta ah iyo qaababkeyga dhibaato la'aan waxaana u isticmaali doonaa mid ka mid ah kuwa ugu cadcad.
Marwalba waan badalayaa biraawsarka, mahadnaqa soo dejinta ee calaamadaha, muhiimad badan ma siinayo isticmaalka aan siiyo mid kasta. Ma lihi mid aan ugu jeclahay, hadda waxaan hayaa Chrome, Firefox iyo Opera, oo si sax ah, markaan aqriyay qoraalkan, waxaan isticmaalayaa Midori, runtiina runtii waan jeclahay, laakiin sidaan idhi, aniga mid aad jeceshahay ha haysan. Laakiin taasi macnaheedu maaha in maalin uun aan yeelan doono mid.
Ku jawaab Stif
Sidee yaab leh, waxaan isticmaalayaa Lubuntu waxayna igu tuureysaa inaan isticmaalo MacOS, qofkasta hahahahaha.
Waad ku mahadsantahay qoraalka, ma aanan ogeyn inay jiraan daalacashada badan, laakiin waxba ugama beddelin Chrome waxna, maareynta calaamadaha, kordhinta iyo iswaafajinta waxba uma badalin. Farxad!
Waxaan tijaabinayay nooca ugu dambeeyay ee sida caadiga ah ku yimaada Trisquel Mini (oo tan iyo markii aan nahay, waa maxay qaybinta weyn ee Trisquel uu yahay !, 100% Software Bilaash ah, laga soo bilaabo xididka kernel ilaa caarada desktop-ka, waxay ahayd noloshayda u iftiiminaya dhamaan mashiinada aan ku rakibo, waxay kor u qaadeysaa wax walba hal mar, iyadoon wax dhib ah qabin), ayuu yiri, in Midori ay iga yaabisay sida ay ufiican tahay howsheeda, laga yaabee inay wali xoogaa xasilloon tahay, laakiin ay tabs haddii aad rabto, sidaa darteed haddii ay dhacdo, waad sii joogi kartaa meeshii aad joogtay (xitaa waxaad ku amreysaa inaadan ku dhejin tabsyada illaa aad doorato). Waxay leedahay fidin aad u qabow oo kuu oggolaaneysa inaad nuqul ka sameyso URL-yada dhammaan tabsyada furan isla markiiba, si aad ugu dhejiso si aad hadhow u sii wadato ama aad u kaydiso si gooni gooni ah.
Dhinaca kale, Epiphany / Web ma joojinayo niyad jabkeyga xoogaa gaabis iyo xasillooni darro aan dareemo, laakiin taasi waa wax caadi ka ah sii deynta ugu dambeysa ee dadka Gnome. Aynu rajeyno inay dhaqso u soo noqdaan, maxaa yeelay haddii ay wax ku caddeeyeen Gnome2, waa inay wax weyn qaban karaan 🙂
By the way, kuwa leh "Waxba ugama badalayo X" waxaan u sheegi lahaa inay dib u fikiraan, xamaasad darradaani caqli ahaan ma noqon karto caqli ahaan, way ku filan tahay in la helo wax ka wanaagsan oo la beddelo, sida kaliya ee loo samayn karaa waa fur oo isku day adoon cibaado lahayn.
Ku jawaab rv
Waan jeclahay qupzilla, laakiin ma haysto addons si aan u turjumo websiyada, evernote, readitlater iyo wixii la mid ah xad la'aan. Waxaan hayaa labaad…. iyo inaan jeclahay :(.
Waxaan la joogayaa opera xiga iyo google chrome 20
Waxaan adeegsaday Firefox, Chrome, Opera iyo Ephifany. Aniga sida ugu fiican waa Opera.
Ku jawaab facundokd
Waxay siisay_ dijo
MA OGOL in QupZilla ay la jaanqaadi karto kordhinta Firefox / addons. Taas bedelkeeda, waxay u dhaqantaa sidii inay tahay IE ama chrome markay galayaan webka addons.mozilla.org, waxay u fasirtaa inay yihiin wax la yaab leh biraawsarka. Kuu ogolaanayaa kordhinta gaarka ah sida PIM, Greasemonkey ama Mouse Gestures, haa. Oo waxay leedahay xayeysiis xayeysiis ah.
Waxaa la mid ah kordhinta Chrome, waxaan dhihi karaa tan haddii ay ahaan laheyd qoraal. Oo waliba kuu oggolaan mayso inaad abuuritaano uga dhigto bogagga shabakadda adoo jiidaya oo hoos u dhigaya, wax muhiim ii ah. Hadaanay taasi ahayn, inbadan ayaan sii isticmaali lahaa. Laakiin waa dhakhso oo dhaqso badan, waa inaad qirataa.
Available Available 1.6 oo ay ku raran yihiin warar
Chip-ka cusub ee Intel ayaan la jaan qaadi doonin Linux ama Android